Tsidi-pahitra an’i Talata-Ampano [Fianarantsoa] – i am a malagasy in genève
27 octobre 2007 15 mars 2010
Tsidi-pahitra an’i Talata-Ampano [Fianarantsoa]
Dianay ho any Andoharanomaitso, faritr’Isandra any Andrefana Atsimon’i Fianarantsoa. Tsy nivily avy hatrany teo Soaindrana (antsampanana) anefa izahay fa mbola nanohy kely nianatsimo. Dify kely ny toeran’ny kôperativa « Lazan’ny Betsileo » izay fanodinana ny voaloboka ho divay. Mitsotsorika moramora, ary rehefa tafita tetezana kely dia miolankolana miakatra ny vohitra misy an’i Talata-Ampano.
Toy izao no fahita ny tanàna avy aty Avaratra. Toa milalao ra-kiafina ambadik’ireo hazo maitso mijoalajoala ny tanàna ka isaky ny fiolahana dia indro fa miafina indray.
Nohon’ny hafohin’ny fotoan’ny diako izay tsy azo ivalamparana sy ny làlana izay mbola tsy maintsy haleha dia tsy nikasa ny hijanona ela tao aho fa izay fotoana hakana sary ireo sorabe manondro ny anaran-tanàna [am-pidirana na am-pivoahana] ihany dia hiverina aho.
Raha tsy nahita soratra aho avy aty Avaratra dia nanapak’hevitra ny nanavatsava ny tanàna izay andaniny sy ankilany amin’ny RN7. Vetivety foana dia tafavoaka ary indrisy fa tsy nahita sorabe koa avy any Atsimo. Ny hany soratra Talata-Ampano tazako dia ireo soratra mandravaka ny EPP, ny sekolin’i Masera, ny ozinina fanofana hazo [tsofa | scierie], sns … Tsy ireny anefa no nofidiako fa fanondroan-dàlana iray izay manondro fiolahana mitondra mankany amin’ny toeram-pitsaboana fototra.
DIa tonga tao an-tsaiko ity teny tamin-tsarimihetsika ity :
« Zavatra mety mitarika loza ny fanaovana blaogy hoy izy nampitandrina ahy. Hitafatafa amin’izay olon-tsy fantatra ianao, avy eo ianao dia hanam-paniriana ny hihaona amin-dry zareo, dia hivoaka ny tolam-baravaranao ianao ka hizohy ny arabe, ary raha tsy feranao ny dian-tongotrao, dia tsy fantatrao akory izay toerana itondran’ny tongotrao anao »
Dikanteny malalaka ny tenin’i Frodon Sacquet, Ilay Tompon’ireo peratra, Ireo mpiray dia noho ny peratra [le Seigneur des anneaux, la communauté de l’annneau].
Tsy amin’ity indray mitoraka ity aho izany no hanandrana ny tono-akohon’ny Talata-Ampano ankafizin’i Rotsaka >> loatra. Tsy manana sary betsaka na tantara hambara koa aho hampahalalana an’i Lova >> bebe kokoa ity toerana manambara zavatra aminy ity.
Tsy mody tanam-polo anefa aho satria na dia tsy misy sary hanamarina aza, ny ahy ny hotsarovako momba an’i Talata-Ampano dia ireo ankizy marobe nifamahofaho mandritra ny fakan-drivotra. Ireo fivarotana vitsy milahatra mitanjozotra amin’ny RN7. Ireo tovovavy « mitrêka » [mivorivory miresadresaka] eo amin’ny sary izay toa manambara fa mikoriana toy ny renirano tony ny fiainana ao Talata-Ampano 😉
Avy nanamarina fa mazava azo apetaka eto amin’ny blaogy ireo sary nalaiko, dia indro izahay nitodi-doha nianavaratra sahady. Nandao ny RN7 teo Antsampanana dia nanohy niankandrefana nizohy an’Andoharanomaitso « Isandra soa soa ! ».
[nialoha : Liam-baovao ny Malagasy >>]
Posté dans tsidikaTagué fianarantsoa, foto, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, photo, photographie, photographies, photography, photos, rn7, talata-ampano, Tananarivepar tomavana11 commentaires
11 réflexions sur “Tsidi-pahitra an’i Talata-Ampano [Fianarantsoa]”
27 octobre 2007 à 10:12
Fantatro ihany Fianarantsoa, tànana tsy dia manintona loatra ny tanora. Fony mbola zatovo Ikala no nandalo tany ka tsy mahalala afa-tsy ilay hotely lehibe mampalaza azy: « Soafia ».
Kanefa rehefa tantarainao eto izy dia mangitakitaka te hody any indray aho, hitsidika an’i Talata-Ampano.
27 octobre 2007 à 21:39
> te hody any indray aho, hitsidika an’i Talata-Ampano
Mitovy ihany isika izany, fa ny ahy maro koa ireo toerana tsy fantatro anefa efa nandalovako.
Misaotra amin’ny famporisihana e 😉
14 novembre 2007 à 21:58
Faly ery aho Tomavana raha nahita ity sarin’ny Talata – ampano sy ny tantara nilazanao azy.
Betsaka ny fahatsiarovana izay mirakitra ato am-poko fonosin’io tanàna kely io.
Misaotra anao namoha izany indray.
Ny ahy dian’ny mpivahiny ihany, ary ialako tsiny aza fa tsy manan-kambara firy aho satria fantatro fa betsaka ny tokony holazaina … ka tsy misy tokony hisaoranao ahy akory 😉 izaho aza no ravo amin’ny nizaranao ny hetsim-ponao.
28 décembre 2007 à 05:18
Faly sady variana tokoa ny « kiaky » nahitan’ilay sary.
Ilay fandikana ny Frodon aloha dia mafinaritra tokoa 🙂
Ikiaky no isaorana fa raha tsy ianareo dia tsy nandalo ity tanàna mahafinaritra ity aho fa avy dia nanitsy.
Mbola manam-pikasana ny hiverina sy hanandrana ny tono-akoho ao aloha aho na izany na tsy izany 😉
He mahatsiaro ny tany niaviako aho de io lazainareo io hoe hoany Andoharanomaitso. Misaotra Nenitoa
Tsara ny mahatsiaro sy mitodika ny tany nihaviana 🙂 Faly mandray anao eto aina
optifriend dit :
miasa aty mananjary za amzao fotoana izao.teraka tao talata ampano za sady lehibe tao.mbola ao ny RADko sady mankany foana aho matetika.mahafinaritra ny tanàna sady tokony handroso fa saingy ny mpitondra mihintsy no mamotika azy.ny jiro eny am poteau tsy mirehitra intsony nefa talala ampano no anisan’ny tanàna mpamokatra herin’aratra mamatsy ny faritanin’i Fianarantsoa ,ny dahalo y ny asany manjaka,ny tantsaha sahirana mafy,na dia eo aza izany rehetra izany dia tsy mety hadinoko ny tananako fa mahamanimanina fôna indrindra rehefa aty antany lavitra aty;tongava mba mamangy ianareo na dia any ampita any aza
← Sao mba misy fitaovana tsy ilainao intsony any ho any ? | CH-Madagascar
07|11|10 – Sakafo Malagasy hanohanana ny marenina [Penthalaz, Lausanne] →